Iyo Yekupedzisira Nongedzo kune Anotsanangura Vhidhiyo (ine Mienzaniso) | Martech Zone
Chipiri, June 3, 2014 Svondo, October 4, 2015 Douglas Karr
Iwe pamwe wakaona mawebhusaiti mazhinji achishandisa mavhidhiyo ane hupenyu pamapeji avo ekumhara. Hazvina mhosva kana iwe ukavatumidza mazita ekutsanangudza mavhidhiyo kana mavhidhiyo emakambani; ivo vese vanoshandira chinangwa chimwe chete: kutsanangura chigadzirwa kana sevhisi nenzira iri nyore uye inokurumidza, izvo zvinoita kuti chive chinhu chikuru chekushambadzira kune chero bhizinesi.
Nei paine akasiyana masitaera ekutsanangura mavhidhiyo? Chimiro chega chega chinokwezva kune rakasiyana rudzi rwevateereri uye zvakare chinokanganisa bhajeti yechero vhidhiyo yekugadzira. Kuti ubate vateereri vako uye utange kunyatso shandura, iwe unofanirwa kuziva imwe neimwe sitaira yeVatsananguri Vhidhiyo. Mubvunzo ndouyu:
Ndeipi yakanakisa dhizaini yeanopisa anotsanangura vhidhiyo yewebhusaiti yako?
Isu takaunganidza runyorwa rwemhando dzakakurumbira dzemavhidhiyo ekutengesa evhidhiyo, pamwe chete nemazano edu akasarudzika eumwe neumwe wavo.
Iyi yakapusa screen kutora kana vhidhiyo firimu inoratidza maitiro ekushandisa chirongwa, webhusaiti kana software. Screencast mavhidhiyo ndiwo akaderera-bhajeti mhando yevhidhiyo asi zvakaenzana zvinobatsira. Aya mavhidhiyo ari pamusoro pedzidzo pane kumaka. Iwo mavhidhiyo akareba (anopfuura maminitsi mashanu), uye anoshanda mushe kune vanotarisira vanoda kuona mashandiro anoita chigadzirwa vasati vatora matanho.
Cartoon Maitiro kana Hunhu Mhuka Vhidhiyo
Iyi ndeimwe yeanonyanyo kufarirwa animated anotsanangura mavhidhiyo mhando pamusika. Nhau inotungamirwa nemunhu ane hupenyu, anounzwa dambudziko hombe raanotadza kugadzirisa. Ndipo apo chigadzirwa chako kana sevhisi painowonekwa… kuchengetedza zuva!
Hunhu kazhinji hunomiririra yako brand persona (target vateereri), saka zvakakosha kuve neyakajairika dhizaini hunhu iyo inowirirana navo, uchiita zita rako nekuipa manzwiro uye hunhu. Aya marudzi emavhidhiyo ane mhedzisiro yakakura nekuti anokurumidza kubata pfungwa yevaoni uye anonakidza chaizvo kuona.
Iyi fashoni ine fashoni uye inotonhorera yakatanga kugadzirwa nemufananidzo anodhirowa pabhodhi chena ichinyorwa nekamera. Gare gare, iyi nzira yakashanduka uye ikozvino yakagadzirwa manhamba. Kudzoka muna 2007, UPS yakaratidza Whiteboard Commercials, uye muna 2010 Royal Society of Arts yakagadzira mifananidzo ye whiteboard kubva kuhurukuro dzakasarudzwa, zvichiita kuti RSA's Youtube chiteshi ive # 1 chiteshi chisina pundutso pasi rese.
Whiteboard Mifananidzo inzira yepamusoro yekuita, nekuti ine nzira yekudzidzisa, panogadzirwa zvirimo pamberi pemaziso evaoni.
Motion mifananidzo ndeye, zvakanyanyisa, graphic zvinhu mukufamba izvo zvinoshandisa simba remavara uye maumbirwo kuburitsa mameseji akaomarara angadai asingakwanise kuendesa neimwe nzira. Aya mavhidhiyo anopa masitayera ekubata emabhizinesi ane akanyanya profiles uye iri nzira huru yekutsanangura zvisingabvumirwe pfungwa.
Aya mavhidhiyo anotsanangudza anonyanya kukanganisa neB2B yekutaurirana kuyedza.
Motion Graphics ine 3D Elements
Motion Graphics kuchangamuka ne3D zvinhu zvekubatanidzwa zvinounza kutaridzika kwakanyanya uye kwounyanzvi. Ivo vakanaka mukugadzira kambani yako kumira pamusoro pemakwikwi.
Motion Graphics ndiyo sarudzo yakasarudzika yemakambani uye zvigadzirwa zvine chekuita nematekinoroji matsva, masevhisi edhijitari, kunyorera kana software.
Cartoon Chimiro neMotion Graphics
Cartoon Chimiro Mutsananguri Mavhidhiyo neMotion Graphics ndeimwe yemhando dzinozivikanwa dzevideo yehupenyu kunze uko uye, zviri nyore sezvazvinonzwika, vanounza musanganiswa wemaitiro. Vavara veKatuni vanotungamira nyaya uye vanopa nzira yepedyo nevateereri, nepo kushandiswa kwemaficha emifananidzo kuchinjisa kuchishandiswa kutsanangura pfungwa dzakaomarara.
Nemaitiro aya, isu tinowana akanakisa epasirese nyika - Iyo ine hushamwari chimiro uye zvinosekesa madimikira eiyo katuni dhizaini vhidhiyo uye simba rekubata mifananidzo yeanofamba maficha maitiro.
Isu tinokurudzira iyo B2C kutaurirana, asi ivo vanokwanisa kushanda nemazvo kumabhizinesi madiki uye kutanga-kumusoro futi.
Mira-kufamba kana Claymation Mhuka Vhidhiyo
Mira-inofamba inotsanangura mavhidhiyo ndeimwe yemaitiro ekare-kare sezvo iwo asingatsamiri pakakwirira-kumagumo tekinoroji yedhijitari! Aya mavhidhiyo akagadzirwa nemaoko - furemu yakagadziriswa nefuremu.
Iyi yemifananidzo inogadzirwa nekutora furemu yega yega, kana ichiri pikicha uye wozotamba mafuremu akarekodwa kumashure akateedzana, zvichitora nguva yakareba kugadzira. Mhedzisiro yacho yakatosiyana uye inoshamisa kwazvo. Mira kufamba inzira yakanaka kana yaitwa mushe, inogona zvakare kuve inodhura.
Tinokurudzira rudzi urwu rwevhidhiyo kana iwe uchida kushandisa nzira yekunzwira tsitsi nevateereri vako.
3D Mifananidzo Yehupenyu
A nyanzvi vhidhiyo yehupenyu ye3D zvinogona kushamisa chaizvo, nekuti hapana miganho kune izvo vhidhiyo ye3D inogona kuita. Nekudaro, iyi sarudzo ndeimwe yeanonyanya kudhura, saka haisi iwo sarudzo yekutangisa ine mashoma mabhajeti.
Kana iwe uri kunyatsofunga nezvekugadzira iyo 3D animated vhidhiyo uye iwe unogona kuzvikwanisa, iwe unofanirwa kutanga waita basa rako rechikoro uye wotsvaga makambani ane ruzivo. Yakaderera bhajeti 3D animated vhidhiyo inogona chaizvo kutungamira kune yakaipa mhedzisiro.
Iye zvino wave nekutarisisa kukuru kwerudzii rwemavhidhiyo anotsanangudza masutu akanakisa kune rako bhizinesi peji rekumhara, uye rinozonyanya kubata vateereri vako. Unoda zvimwe? Dhawunirodha Yum Yum Vhidhiyo yemahara ebook - Iyo Yekupedzisira Nongedzo kune Anotsanangura Vhidhiyo!
Kuzivisa: Yum Yum akabatsira kuisa ichi posvo pamwechete Martech Zone vaverengi uye isu tashanda navo zvakananga pamapurojekiti mashoma!
Tags: 3d mavhidhiyo ehupenyu3d mifananidzo3d vhidhiyovhidhiyo yehupenyukatuni vhidhiyohunhu hupenyu hwevhidhiyoivhu reopopayiivhuanotsanangura videoanotsanangura mavhidhiyomotion graphicsmafirimu ekufamba-fambascreencast vhidhiyokumira-kufambachena bhodhi rekupopota vhidhiyochena bhodhi inotsanangura vhidhiyo
Mashandisiro anoita Vakadzi nevarume Zvemagariro Midhiya uye Nhare Zvakasiyana
Sep 21, 2014 na6: 04 PM
Ini ndiri muhabhu yekusejera mhando yezvinhu saka yakanaka uye yakanyatsotsanangurwa nemuenzaniso wakanaka.
Ndatenda zvikuru neruzivo urwu zvinyorwa uye mavhidhiyo.
May 14, 2015 pa 6: 16 PM
Zvino chero vatengi vangu pavanobvunza kuti ndedzipi mhando dzevatsananguri mavhidhiyo andinoita ini ndine ino inobatsira gwara rekuvaratidza. Kutenda Douglas nekuisa iri gwaro pamwe chete. Pane zviripo here imi vakomana vangangokwanisa kuratidza bhizinesi rangu pane yako blog? Ini ndakaisa email yangu muchikamu chekutaura